Awutholi Ukukhuluma Ama-Gigs Ngenxa Yobukhona Bakho Ku-inthanethi | Martech Zone
Ngesikhathi ngisethula ngoMgqibelo ngiya ku- Inhlangano Yesipikha Yavelonkhe, Ngabelane ngesethulo nedatha esekelayo yezipikha ukuze ziqonde ukuthi kungani okuqukethwe namasu ezenhlalo kwakubalulekile emizameni yabo yokwakha igunya nokuthola amathuba okukhuluma. Yiqembu elimangalisayo engizokhuluma nalo ngoba linginikeza inani elikhulu empendulweni ngokukhuluma kwami ​​njengoba ngibanikeza ekuphakamiseni okwabo. Ngibonga kakhulu UKarl Ahlrichs ukuthola leli thuba, yena uqobo ungumholi ekukhulumeni ngezimali zabantu kanye nokunakekelwa kwezempilo.
Izikhulumi eziningi zomphakathi ezikhona zithola amathuba ngokuseshwa kwezipikha ku Izikhulumi futhi Iwebhusayithi ye-NSA. Amanye amathuba eza ngezwi lomlomo. Ngalezi zizathu, kunokungabaza okuthile ngokusebenza kokuqukethwe nemithombo yezokuxhumana kwabaningi balaba bachwepheshe asebeneminyaka besekethe.
Yize kuyiqiniso ukuthi zingatholakala ngalezi zingosi, noma ngabe zinedumela noma cha igunya online kubalulekile ukuvala amathuba ku-inthanethi. Uma ngizotshala izinkulungwane noma amashumi ezinkulungwane zamadola ngokuqasha isikhulumi somphakathi, ucabanga ukuthi amathuba okuthi abaxhumanisi bemicimbi noma amabhizinisi abezocwaninga ubukhona bakho ku-inthanethi ngamavidiyo nezicucu zobuholi obucatshangwa okwabiwe ngewebhu?
Uma uyisikhulumi esidlangalaleni futhi nomncintiswano wakho enkulumweni yabo ehlelwe kahle ku-Youtube, i-byline ku-Wall Street Journal, kanye newebhusayithi enhle lapho begcina khona ikhalenda elisebenzayo lemicimbi kanye nomtapo wezinsizakusebenza - wenzani ucabange ukuthi amathuba akho okukhuluma kulowo mcimbi uma ungenakho okufanayo? Ukuqagela kwami ​​ukuthi ulahlekelwa ngamathuba amaningi.
Isipikha esisodwa asithengiswanga. Uzwakalise ukukhathazeka kwakhe ngokuthi empeleni bekukhona ubudedengu ngaphandle lapho abutholile ngenkathi efuna okuqukethwe okungaba lusizo ezilalelini zakhe. Ngamtshela ukuthi ngifisa sengathi lokho kungaba yiqiniso ngomkhakha wami, lapho kunomncintiswano omangalisayo futhi ozakwethu babelana ngemininingwane emangalisayo. Ngifisa sengathi ngabe ngangikhona embonini eyayintula okuqukethwe kwekhwalithi online… ngoba ngangizosebenza ngokuphelele ekubuseni leyo makethe! Lokho akuyona inkinga… kuyithuba.
Emcimbini wezinsuku ezinhlanu, sihambile ngezigaba zokwakha ubukhona bakho bezokuxhumana kanye negunya online. Kuyindlela ehleliwe:
Izigaba ezine Zokwakha Isiphathimandla Esiku-inthanethi
Advocacy - lalela, uphendule futhi uhlangane nabaholi embonini yakho kanye namathemba ozama ukuxhumana nawo. Cabanga ngalokhu njengokuqala ingxoxo.
Ukuthembeka - zisungule njengesisetshenziswa nomuntu onganikeza inani embonini. Fundisa abantu, wabelane ngokuqukethwe okukhethiwe, futhi wenze izingeniso zokubhangqa abantu abanezinkinga nalabo abanezixazululo.
Izilaleli - manje njengoba uxhumekile, sekuyisikhathi sokukhula, ukukhuthaza nokujabulisa izithameli zakho ukuze ukwazi ukwakha ukuxhumana okomuntu siqu nokwangokomzwelo nazo.
Community - izethameli ziyalalela, kepha imiphakathi iyazikhulumela. I-grail engcwele yemidiya eku-inthanethi kulapho izethameli zakho zikukhuthaza esikhundleni sokuthi wena wenze wonke umsebenzi.
Faka lokhu emuva ekukhulumeni kwasobala bese ucabanga ngamathuba lapho umphakathi wakho uqala ukufuna ukuba khona kwakho emicimbini noma ukukuncomela ngegama eliyisihluthulelo elilandelayo ekhoneni!
Tags: izikhulumikarl ahlrichsinhlangano yezikhulumi zikazwelonkensaigunya onlinetholakala kuyi-Internetuphawu lomuntu siquukukhuluma esidlangalaleniukuba khona emphakathini